Home Home Madaxweyne Yoweri Museveni oo sheegay in ciidamadiisa uu kala bixi doono...
Madaxweyne Yoweri Museveni oo sheegay in ciidamadiisa uu kala bixi doono Soomaaliya
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa ku hanjabay in ciidamadiisa ka tirsan howgalka nabad ilaalinta Amisom uu kala baxayo dalka Somalia, haddii ay Qaramada Midoobay ku adkeysato yareynta tirada ciidamada Amisom ee ku sugan gudaha Somalia.
Madaxweynaha Uganda ayaa waxa uu sheegay inuu shaqsi ahaan QM ugu war geliyey in ciidamada Uganda ee gaaraya 6,400 oo askari uu kala baxayo haddii la xoojiyo go’aanka lagu yareynayo ciidamada Amisom.
Hadalka Museveni ayaa kusoo aadayo xilli madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu hore ugu hanjabay inuu ciidamiisa kala baxayo Somalia haddii lagu adkeysto go’aanka ah in 1,000 askari laga dhimo ciidamada Burundi ee ku sugan Somalia.
“Waxa ay igula taliyeen inan dhimo tirada askarta Uganda laakiin kama dhimi doono hal askari in aan kasoo wada saaro Somalia maahane,” ayuu yiri Mr Museveni.
Uganda ayaa ah dalka ay ciidamada ugu badan ka joogaan Somalia waxaana hadda Somalia ku sugan 6,400 askari oo Ugandase ah.